Pilanesberg Park - safari na foto ụmụ anụmanụ - South Africa - 1aviagem.com
Gara aga post: Anyị gbara nwanyị nwanyị Mexico ajụjụ ọnụ wee weta Ndụmọdụ na Ndụmọdụ Coronavirus
Nkwupụta ọzọ: Ndị Mayans na amụma banyere njedebe nke ụwa - Mexico
Edebere Ọnwa abụọ gara aga 1 comment site Römulo Lucena
Ndewo nwoke, post a ga - abụ ngwakọta nke ndụmọdụ na akụrụngwa nke anụmanụ mụtara n'oge njem mbụ m na South Africa.
Ndụmọdụ Kruger Park
Imirikiti ndị mmadụ na-eche ịga South Africa, ma ọ bụ ndị nọrọla ebe ahụ, na-eche ime safari foto (ihe egwuregwu). Kedu ezigbo echiche. Animalshụ ụmụ anụmanụ na ebe obibi ha, na-agagharị n'oké ọhịa, na ikuku ohuru nke savannah na mmekọrịta dị n'etiti ụmụ anụmanụ bụ ọrụ ndị njem na ọ veryụ nke ukwuu. Ọbụna ka mma mgbe ị nwere ike ịchọta nnukwu 5 (Nnukwu ise). Ee, ọ bụ ihe ịma aka, maka na anaghị akpọchi ụmụ anụmanụ n'ọnụ ụlọ, ha na-atọghe ma enwere ike ịchọta.
Ọ bụ ya mere ịga Kruger Park na-atụ aro ka ị nọrọ karịa otu ụbọchị. E kwuwerị, enwere ihe karịrị 20.000 km² nke ndozi ọhịa. Ogige ahụ gbatịkwara ruo ókèala Mozambique.
Nke a pụtara na maka ụdị njegharị a, ị ga-achọ ego na oge. Ka anyi kwuchaaOgige Kruger. Ogige ọhịa ọhịa kachasị ama ama na South Africa.
Ha na-ahapụ Brazil, ọtụtụ ụgbọ elu na-aga obodo Johannesburg, nke bụ ihe dịka 400 km site na Kruger Park. Gịnị na-ejide gị ma ọ bụ mee ụgbọ elu ọzọ na-aga otu n'ime ọdụ ụgbọelu etinyere n'ime ogige ahụ. Olee: Hendrik Van Eck; Ọdụ ụgbọ elu Hoedspruit; Ọdụ ụgbọ elu Mala Mala; Sgbọ elu Sukuza; ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ elu Kruger Mpumalanga.
Phew, enwere ọtụtụ ebe ọdụ ụgbọ elu nke ị nwere ike ị nwebikwa mgbagwoju anya. O doro anya na ọ bụrụ na ị gara ụlọ ọrụ resịrị gị ngwugwu njem gụnyere Kruger Park, ha nwere ike dụọ gị ọdụ n'ọdụ ụgbọ elu ị ga-aga iji ruo ebe ahụ.
Nhọrọ ndị ọzọ bụ ngọngọ nke ụfọdụ ụlọ ezumike mara mma, ma ọ bụ ọbụna ụlọ ọrụ bọs na-enye ụdị ọrụ ahụ.
Nsogbu a bụ na ọbụlagodi, anyị na-ekwu maka ihe dịka narị kilomita anọ na anọ n'ụzọ kacha nso. Nke a nwere ike wepu “azụmazụ sitere na Johannesburg rue Kruger Park.
Ma mgbe ị na-eme njem ego, ego na oge dị ụkọ. Ma otu esi edozi? M ga-anọ na-enweghị Photo Safari? (Nchekwa egwuregwu) Agaghị m ezute Big 5?
Wetuo obi, ihe niile efughi efu!
Ọ bụrụ na m agwa gị na achọtaram usoro dị ọnụ ala karịa nke dịkwa Johannesburg ebe enwere ike ịme njem gburugburu n'ime otu ụbọchị?
Ee, m na-ekwu maka Pilanesberg National Park.
Ọ bụ ihe dịka narị kilomita abụọ site na Johannesburg (ọ dịlarị ọkara kilomita na oge kwa). Ma ọ ga-ekwe omume ịbịakwa otu ụbọchị. Ichebela oge na ego.
Ọ bụ obere ihe ndobe nke pere mpe, ọ dị obere ma e jiri ya tụnyere Kruger Park, ebe naanị 550 km² dị.
Kedu nke masịrị gị n’otu aka. Ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịhụ ụmụ anụmanụ n'oké ọhịa, na ebe obibi ha wee gaa njem gaa Safari ịchọta Nnukwu 5. Mpaghara dị ntakịrị na-ejedebe na-etinye uche ụmụ anụmanụ kwa km² nke na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịchọta.
Pilanesberg dị mma maka ndị nwere obere oge na Johannesburg, ga-achọ ịhụ Big 5 ma gaa njem na 1 ụbọchị.
Vidiyo na-eso nke a bụ ọmụmaatụ nke ihe ị nwere ike ịchọta na safari a.
N'ezie Pilanesberg Park bụ ogige zuru oke nke na-enye gị ohere ibi ndụ ahụmịhe pụrụ iche na ị ga-eche maka ma ọ bụrụ na ị ga-eme njem nke akụ na ụba na nke na-agba ọsọ.
Mana, n'ezie, ọ bụrụ na ịnwere oge ma nwee ike ịga Kruger Park, ọ ka bụ ogige kachasị mma ịga. Na mgbakwunye na akụrụngwa buru ibu na ụlọ akụ ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ gburugburu.
Mana ka emechara ndi “Big Five” ma obu gini bu egwuregwu Big 5?
Ndi dinta chekwara okwu a “Nnukwu ise” ma zoo aka na anụ ọhịa ise nke kachasị sie ike ka mmadụ jiri ụkwụ chụọ ha.
Ọ dabara nke ọma, akụkọ ihe mere eme nke ịchụ nta safari agbanweela. Ọbụlagodi na o siri ike onye ọ bụla ga-eji ụkwụ chọọ. A na-eji kamera dochie egbe ndị ahụ. Taa, anyị nwere nyocha nke njem na-adigide, nke kachasị maka mmadụ niile karịa iji ngwa agha.
Na Nnukwu 5 bụ:
Ọ bụ ala kachasị ukwuu anụmanụ. O sitere nha 4 ruo 6 na ịtụ ihe karịrị mita 3 n'ịdị elu na 5,5 ruo mita 6,5 n'ogologo. O nwere ikike na enyere gi aka iburu akari iri. O nwere ọdụ ọdụ ọdụ anọ nke na-enye aka igbutu osisi, maka nchekwa na maka ọgụ.
Enyí na-ebi n’anụmanụ, ọ bụkwa m ka e kwesịrị iwere dị ka ndị eze nke oke ọhịa! Nkwanye ugwu umu anumanu ndi ozo n’ebe ha no na udo n’udo (tumadi na aguu) bu ezigbo ihe nlere nke onye ndu anyi puru ihu. Na mgbakwunye, ha na-egosi na a na-ejikwa ike ha dị ukwuu iji mepụta gburugburu ọhụrụ maka ezinụlọ, na-emeghe ụzọ na ọbụna ịmepụta àkwà mmiri site na igbutu osisi na nkume. Ezi onye ndu.
Nnukwu anụ anụmanụ ọzọ dị tọn ruru 2 ruo 3. o bukwara mita 3,5 rue 4. O nwere mpi abụọ n’imi ya, ma ọ dị mwute ikwu na ọ ga-emebi. Mmeputakwa nwa ya na - adi nway oo, ihe dika umu ato n’ime afo abuo. na ọ fọrọ nke nta ka ahụ gị dum na-eji ọgwụ.
Rhinoceroses na-eme njem obere obere na ndụ ha niile. itskwụ ya na-adị ka ogwe osisi. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ụmụ nwanyị na-esokarị ụmụ nwanyị ndị ọzọ emekọrịta ihe ma na-ete imi ha dị ka ihe na-egosi ọbụbụenyi. Lesmụ nwoke, n'aka nke ọzọ, bụ oke ala ma kama igosipụta ọbụbụenyi, ha na-agbanye nwoke ọzọ na ngalaba ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ha anaghị alụ ọgụ n'etiti ndụ na ọnwụ. N’ezie, ha na-aga n’ihu ruo mgbe otu n’ime ha gwụrụ ma pụọ. Rhinos na-achọ ebe nwere ndo, mmiri dị mma na nri. Anyị enweghị ike ịsị na ha adịghị mma, ọ dị mma?!
3- Buffalo: di 500 n'arọ 600 ma buru oke mmadu n’onodu 1,60 rue 1,80. Nnụk ya na isi ya na-agbasi ike.
Buffaloes na-akụziri anyị ezigbo ihe isi okwu a pụta n'isi! Ha na - alụ ọgụ maka ndị isi nke otu ahụ. Ha na-echipụkwa isi ha ruo mgbe otu n’ime ha hapụrụ ma ọ bụ nwụọ n’usoro. Ya mere anyị mụrụ na isi ike nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo echiche. Na na ọ baghị uru ịlụ ọgụ maka nchịkọta, nke a ga - akpata naanị isi ọwụwa! Ka onye ndu ghazie.
A na-akpọ eze anụmanụ! Ọ dị kilogram 150 ruo 250 ma tụọ ihe ruru 1,20 n'ịdị elu. Onweghi nke doro anya ihe kpatara o jiri bụrụ aha a. Fọdụ kwenyere na ọ bụ n'ihi ike ya, ndị ọzọ n'ihi mane ya ka ọ dị ka okpueze. Ndị ọzọ maka ịdị mma ha. Ma ndị ọzọkwa n'ihi na tupu amara ya dị ka onye na-eri ihe. Eziokwu bụ na n'adịghị ka anụmanụ ndị gara aga wepụtara ugbu a, ọdụm riri ụmụ mmadụ n'ezie. Mana nke ahụ bụ n'ihi na ọ bụ anụ, o yikwara ka a ga-ahapụ ya n'enweghị nhọrọ "ụtọ" ndị ọzọ, ọ bụghị n'ihi na ọ bụ onye na-ewe iwe ma nwee obi ike oge niile.
Nke bụ eziokwu bụ na ọdụm dị gara gara gara aga karịa ma ọ baghị ụja, yabụ ihe siri ike karịa ịchụ ya karịa anụmanụ ndị bu ụzọ na listi a, tụkwasị n'ịbụ nwamba nke abụọ kachasị ibu, na-efunahụ ya naanị na agụ.
Dịka anyị hụrụ na vidiyo ahụ, ndị eze na-enwe oge umengwụ na ntụrụndụ ha. N’ezie, ọdụm enweghị ihe ọ bụla na-eme ha n’ụbọchị ma na-ehi ụra n’ụbọchị ụra dị otú ahụ! Know ma mgbe iteta n'ụra kọfị? Ee. Nke a bụ ọdụm n'ehihie! Na kwa ihe nkuzi nke eze nke anumanu nwere ike iwepu eziokwu a na anaghi emetu ha aka site na anumanu ndi ozo ma ghara imacha ihe banyere onye gbara ha gburugburu. A sị ka e kwuwe, ọ bụghị naanị na eze nwere obi ike na ume, kamakwa ịmara otu esi etinye onwe ya na otu esi ezo. N'ezie, ọ bụrụ na ịnọ n'ihu ọdụm, ọ ka mma ịghara ịla azụ ma ghara ịdị ka anụ oriri dị mfe, ma ọ bụghị, ị maara otu o si dị, ọ dị mma?! Nri ga na-aga nke ọma.
5- agụ owuru.
N'ịdị n'etiti 40 ruo 90 n'arọ ma tụọ ihe dịka 0,90 cm n'okpuru ụkwụ anọ ma ọ bụ 4 cm ma ọ bụrụ na ọ nọ ọdụ na ọ bụ anụmanụ kachasị nta na ndepụta a.
Nke a maara otu esi ezo, ahụghị m ihe ọ bụla n'oge Egwuregwu Reserve. Foto a sitere na Bibake Uppal. Agụ owuru yiri jaguar nke anyị nwere na Brazil. Ikekwe ha bụ ndị ikwu, ejighị m n’aka.
Ma nke ahụ nwere ike bụrụ agụmakwụkwọ kachasị mma, ọ bụrụ na ịchọghị ka onye maara etu esi ezo ya.
Ndị a bụ nnukwu 5 a na-ahụta na anụmanụ kachasị sie ike mmadụ ga - achụgharị "n'ụkwụ". Ha niile bụcha n'ọhịa ma nwee ike igbu mmadụ. Ihe ato kachasị bu herbivores, ma ga - awakpo ha ma ọ bụrụ na echee na ha nwere ihe egwu. abụọ ndị nke ọzọ bụ anụ. Ọ dị nwute na taa mmadụ na-eyi mbibi ha egwu mmadụ. Ka emechara, anyi anaghi achokwa uzo ochie ozo. Anyị na-eji teknụzụ dị elu dị ukwuu karị, dịka ụgbọ ala, egbe, ọnya, ma eleghị anya, mgbanye ọkụ ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ?
Ọ dị mma ugbu a ịmara ndị nnukwu ise bụ. N'oge ozo ana m ekwu maka ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, dị ka Hippos, zebra na giraff!
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, kwado blog a site na ịdenye bọtịnụ na-acha ọbara ọbara n'akụkụ. Ma ọ bụ gụkwuo ndị ọzọ site na ịpị ụwa dị n'okpuru.
March 21 si na 2020 gaa 11: 18
Lee ka o si dị egwu! Afọ ojuju!